Fomba fanovàna ny miralenta amin'ny fampivoarana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ao amin'ny rafitra ara-tontolo iainana ara-tsosialy haran-dranomasina - Blue Ventures
Ny asan'ny CARE amin'ny rafitra ara-tsakafo sy rano dia mikatsaka ny handray anjara amin'ny fanatanterahana ny zon'ny fiarovana ny sakafo, ny rano ary ny sakafo ho an'ny vehivavy mpamokatra madinika sy ny fianakaviany. Ny CARE dia mino fa ny fomba fiasa amin'ny fananganana ny faharetan'ny fiaraha-monina amin'ny tontolo iainana rehetra dia tokony hamahana ny hery ara-drafitra sy ny sakana amin'ny fifandraisana izay mandà ny fidirana amin'ny loharanon-karena sy ny fahafahana ho an'ny vehivavy. Ny maha-zava-dehibe an'ity tetikasa fikarohana sy fianarana ity amin'ny CARE dia tena manan-danja tokoa satria mandray anjara amin'ny fandaharan'asa lehibe maneran-tany tarihin'ny mpiara-miombon'antoka stratejika WWF izahay. Ity programa ity - ny Coral Reef Rescue Initiative (CRRI) - dia natsangana mba hiarovana sy hanavaozana ny haran-dranomasina tropikaly ho tombontsoan'ny olona amin'ny alàlan'ny vahaolana mifototra amin'ny natiora. Ny fiaraha-miasa dia ahitana mpahay siansa sy ONG malaza, miara-miasa amin'ny governemanta sy vondrom-piarahamonina mba hiarovana ny vatohara, ny fanjarian-tsakafo ary ny sakafo, ary ny fivelomana amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana.